बिहेको त्यो रात…. मेरो पहिलो सुहागरात ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/बिहेको त्यो रात…. मेरो पहिलो सुहागरात !
बिहेको दिन डोलि अनमाई कार भित्र दुलई राखियो । म पनि उनी सँगै गाडि भित्र पसे । उनका साथीहरु बाहिरबाट कोई वाई वाई को इसारा, कोहि रुदै त कोहि बेहुलिलाई हसाउदै थिए। मलाई पनि आफ्ना साथीहरुले हसाँई रहेका थिए । हाँस हाँस आजै हो हास्ने दिन भोलिबाट रुनु पर्छ त्यसैमा अर्का साथीले थप्यो, थाहा छ ! केटी रुने भनेको बिवाहको दिन मात्र हो तर केटा हाँस्ने भनेको त्यही बिहेको दिन हो, बिवाह पछि रुनु मात्र पर्छ ।
ह्यया हावा कुरा नगर केटा हो भनेर कारको सिसा लगाए । ता कि साथमा भएकी जीवन संगिनीलाई कुनै असर नपरोस भनेर । मनमा एउटा सोचाई आयो साथीहरुले भनेको । के साच्चै बिहे पछि रुनु पर्छ ? के बिवाह गरेका मानिसहरु असन्तोस छन् ? के संसारका सारा मानिस बिहे पश्चात रुनु नै परेको छ त ? झन दुबैको साथ मिले त संसार जिउन सजिलो हुन्छ भन्ने सुनेको थिए । जीवन सँगै जिउनी भनेर बाचा गरेपछि त दुबैले दुबैलाई स्याकृरीफाई त गर्नु त पर्याे नि ।
त्यसपछि त गुरुजीले कुदाउनु भयो कार । उनी तिर हेरे उनी रोईरहेकी थिईन । उनी रोएको देखेर मलाई नै नरमाईलो लाग्यो । अगी सम्म सबैको अगाडि हासेँकी थिईन । म खुसी छु हजुरहरु नरुनु है रुन हुन्न म सधाको लागि टाढा भएकी त होइन भन्दै आफ्ना आमा बाबुलाई सम्झाएर खुसी हुँदै आएकी दुलई आमा बाबू छोपिनसाथ रुदै थिईन् । उनलाई देखेर मन कापि रहेको थियो । नचिनेको केटा पराईको घर कसरी बानिपर्ला भनेर झन भकानिएर रोएकि होलिन् ।
म बिस्तारै उनको छेउ सरे, उनको हात समाए र भने नरौन यार मलाई पनि रुन आईस्कयो यसरी रुनु हुदैँन मैले बेच्नै लानलाग्या त होईन नि…. ! अगी आमा बाबुलाई सम्झाएको गरि आफ्नो मन बुझाउ न । के गर्छाे त संसारको लिलै यस्तो हो तिम्रो आमा पनि बाबा सगँ यसरी नै आउनुभएको त हो नि भन्दै उनीभन्दा पर सरे । गर्दा गर्दा घर आईपुग्यो आमा आएर आएर कार बाट उनको हात समाउन थाल्नु भयो म पनि उनको पछि पछि हिडे । दिद र सानी बहिनी आएर एउटाले पानी र अर्काेले दियो लिएर हामीलाई घुम्न थाले ।
मन मनमा सोच आयो गरिब दुखीलाई त छोरी पाए नि गार्हाे रहेछ छोरी पनि दिनु छ दाईजो नभई हुन्न भन्छन कति मानिस त जन्तीलाई सेवा पनि गर्ने पर्याे । कस्को बिहेमा कति दक्षिणा दिए भन्नेहरु पनि हुन्छन् । न त त्यो साडी दिएर कसैले लाउने हुन उल्टै कुरा गर्छन फलनाको बिहेमा त्यस्तो साडी दिएका बिचरा दिने मान्छेले पनि के गरून् , कति दिउन त । म उनलाई हेरिराको थिए कति थाकेकी होलिन् खुट्टा पनि ढोग्या ढोग्यै छन ।
कसैले भयो पर्दैन भनेन सबले खुट्टा नै अगि सारेका छन । माया लागेर मैले भनिहाले खुट्टा नढोगे हु्न्न त्यतीकैमा एकजनाको आवाज आयो आज त ढोग्न पर्छ । बल्तल ढोग्ने र सारी बाड्ने काम पनि सकियो । उनलाई टाईम लाग्ला भनेर म कोठामा गएर छिटो छिटो लुगा फेरे र उनलाई लुगा चेन्ज गर्न भनेर कोठा देखाईदिए । दिदी उनी सँगै भित्र पस्नु भयो सायद उनलाई हेल्प गर्ने होला । कपडा चेन्ज गरेपछि दिदीले मलाई बोलाउनु भयो आजको दिन बुहारीको साथमै बसिराख भित्रै बसे हुन्छ हेर्न आउने भित्रै आउछन् भन्दै दिदी बाहिर निस्कनु भयो । मान्छेहरुको आवतजवात चलेकै थियो ।
मलाई भने मान्छेहरु कति बेला जालान जस्तो भई रह्यो । १० बजिसकेको थियो त्यतीकैमा दिदी आउनु भयो बुहारीलाई केही भन्नू छ भन्दै भोलि बिहान छिटो उठ्नु पर्छ, नुहाईधुवाई गर्नु पर्छ, सिन्दुर हालेको सेतो कपडा बिहान उठेर धुनु, अरु भोलि नै भनुला अहिले तिमीहरु सुत । दिदीले सुत भन्दा मेरो मनमा छुट्टै आन्नद आयो । सुत्ने बेला हल्का रोमेन्टिक त हुनै पर्याे भन्ने ठानेर म उसलाई जिस्काए ओई म तल भुई मै सुत्छु तिमी बेडमा नै सुत ल ? उसलाई त लाज लागेछ क्यार मुख तल पारिहालिन ।
उनी भित्ता तिर फर्केर सुतिन् । म एकलै के गर्नु बत्ति अफ गरिदिए अनि छेउ मा पल्टिए । उनी एकमस्त एकोहोरिएर भित्ता तर्फ नै फर्किरहिन् । उनलाई म बोलाउन खोज्थे तर सक्थिन । थोरै थोरै मेरा हातहरु उनको कपाल तिर लगे उनको कपाल मुसारे उनी आन्नद माने झै गरि रहिन । ओई यता फर्कन तर उनी मानिन् । पछि उनी बिस्तारै फर्किन् तर मेरा आखाँ मा हेर्न सकेकी थिईनन् । सोचे एकछिन त लभ मेरिज भएको भए अहिले चुप लागेर बस्नु पर्थेन । केही न केही कुरा निस्किन्थियो जुनेली रात हुन्थ्यो । मैले उनलाई अँगालोमा बाधे निधारमा चुम्बन गरे । मैले अँगालोमा बाध्दा उनले असहज भएजस्तो गरिन् ।
उनी खुब आतिएकी थिईन् उनको त्यो भनाईमा नै पुर्ण रुपले माया भरिएर आएको थियो । मैले उनलाई ज’र्वज’स्ति गर्न चाहिन उनले माया र खुसीले सुमपिएको शरीर पो मेरो लागि हक लाग्यो । जब उनी ब’हिस’कार गर्छिन् त ज’र्वज’स्ती गर्नु त्यो कर णी हो । मैले उनको मन दुखाउन चाहिन, तिमी सुत मलाई केही भएको छैन भनेर उनको केश मुसारे, उनी ओके गुडनाईट भनी सुतिन म पनि सुते ।
एकदमै छिटो चल्छ यी राशिका व्यक्तिको दिमाग, हुन्छन् भयंकर साहसी